Macallin gabdhaha u dadaalay oo deegaanka Soomaalida Kenya laga aqoonsaday | Biyoguurenews.com
Home Wararka Macallin gabdhaha u dadaalay oo deegaanka Soomaalida Kenya laga aqoonsaday
Macallin gabdhaha u dadaalay oo deegaanka Soomaalida Kenya laga aqoonsaday
Macallin Soomaali ah oo ka soo jeeda gobolka Gaarisa ee dalka Kenya ayaa muteystay abaalmarinta shaqa wanaagga sanadkan ee gobollada Soomaalida.
Macallin Yacquub Budul Shuuriye waxaa dhawaan la guddoonsiiyay abaalmarin ku aaddan horumarka dhanka waxbarashada uu gaarsiiyay dugsiga uu maamulaha ka yahay.
Waxaana Macallin Yacquub lagu tilmaamay inuu yahay macallinka ugu wanaagsan gobolka waqooy bari Kenya, marka ay timaaddo waxbarashada iyo caqabadaha tacliinta ee soo wajaha dugsiga uu maamulaha ka yahay.
Macallinka ayaa maamule ka ah dugsi sare oo ay gabdhaha dhigtaan oo la yiraahdo SAAQA Girls kuna yaalla duleedka magaalada Gaarisa, gabdhaha Iskuulkaasi dhigta ayaa caqabado dhanka noolasha iyo tacliinta ah la kulma, balse macallin yacquub ayaa lagu ammaanay dadaalka uu geliyay taageeridda ardayda gabdhaha wax ka dhigta Iskuulka uu maamulaha ka yahay.
Macallin Yacquub Budul Shuuriye oo wareysi gaar ah la yeeshay BBC-da wuxuu sheegay “Inuu la tartamay maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaalla gobolka waqooyi bari oo dhan, waxa lagu tartansiiyay na ay tahay maamul wanaagga oo lagu cabbiro inta arday ee sanad dugsiyeedkaasi ka gudubtay imtixaanaadka.
Maamulka iskuulka oo la fiiriyo, tirada macallimiinta dugsigasi wax ka barto, calaqaadka uu maamulaha la leeyahay macallimiinta iyo ardayda, labadi sano ee la soo dhaafay waxa ku kordhay dhismaha iskuulka, arrimahaasi oo dhan ayaa la fiiriyaa” ayuu yiri.
“Marki ugu horreysay waxaan ku guuleystay abaal marinta Gobolka Gaarisa, kaddibna waxaan la tartamay Wajeer iyo Mandheeraa aniga ayaa haddana ku guuleystay, dal ahaan ayaana la ii gudbiyey mar seddexaad ayaan ku guuleystay, abaalmarin heer qaran ahna waa la i siiyey” ayuu yri.
Abaalmarinta la i guddoonsiiyeyna waxay ka kooban tahay Shahaada sharaf, koob la guddoonsiiyey maamulaha sanadkaasi ugu wanaagsan xagga shaqadana waxaan rajeeynayaa in la i dallacsiin doono” ayuu raaciyay Yacquub.
Abaalmarinta la guddoonsiiyo macallinka sanadka ugu wanaagsan xagga maamulka iyo waxbaridda dalka Kenya waxaa sanad walba iska kaashada ururka shaqaaleysiinta mcallimiinta ee loo yaqaanno TSC iyo maamul ay ku bahoobeen dugsiyada sare ee Kenya oo la yirahdo KSHA.
“Abaalmarinta la i guddoonsiiyey waxay ii noqotay dhiirragelin aad u weyn, waxayna igu dhalisay in aan dadaalkeygi sii laba jibbaaro waxaana jira caqabado badan oo hortaagan inay gabdhaheenna wax bartaan” ayuu yiri.
“Waxaa ka mid ah caqabadahaasi guurka degdegga ah oo gabdhaha lagu dedejiyo iyaga oo aan waxbarashada dhammeysanin iyo caadooyinka xun xun ee la midka ah marka arrintan waxay markale igu abuureysaa inaan gabdhaha dhiirrageliyo , inaan maamulka aad u sii wanaajiyo, xuquuqdooda inaan inta aan tari karo aan bulshada ka wacyi geliyo si waxbarashada ay u sii wanagsanaato” ayuu intaa ku daray Macallin Yacquub Budul Shuuriye oo u warramayey BBC-da.
Previous articleXisbiyada Kulmiye Iyo UCID Oo Faah Faahin Ka Bixiyey Kulan Ay Maanta La Yeesheen Kominshanka Doorashooyinka
Next articleWargeyska The Independent: Maxamed Morsi ‘waa la dilay’